Ciyaaryahanka Chechu oo si dhameystiran ula soo wareegtay Kooxda Real Madrid. %
Laacib Sports : Naadiga Kubadda Cagta ee Real Madrid ayaa dhameystirtay saxiixa ciyaartoygii labaad ee usbuuc gudihii kusoo biira, waxaanay warbaahinta usoo bandhigtay difaaca Jose Lopez Martinez oo loo yaqaano Chechu, Real Madrid ayaa Chechu kala soo wareegtay kooxda Malaga, waana da’yar ka ciyaari kara difaaca dhexe iyo dhanka bidix ah.
Laacib kaan Chechu oo ka mid ah xulka qaranka Spain ee ay da’doodu ka hooseyso 17 jirka ayaa waxa uu Arbacadii gaaray garoonka Santiago Bernabeu oo uu ku daawaday ciyaartii Copa del Rey ee Los Blancos ay 3-0 ku garaacday Leganes, waxaana uu ku sugnaa Madrid illaa Khamiistii oo la dhamaystirayey qorista heshiiska iyo dhamaystirka wada-xaajoodka ka hor intii aanu qalinka ku duugin heshiiska.
Ciyaaryahan ka Chechu ayaa ku dhashay magaalada Murcia ayaa u ciyaaray kooxda ku ciyaarta magaca magaaladaas oo uu kasoo baxay kulliyaddeeda, kaddib waxa uu uga wareegay Valencia oo uu usii dhaafay Malaga oo hadda laga soo iibsaday.
Is afgaradka uu Chechu ugu wareegay Real Madrid ayaa waxa qeyb ka ah laacibka Dani Sanchez oo tegaya Malaga kuna sugnaan doona afar sannadood ka hor inta aanu kusoo laabanin Real Madrid, Chechu ayaa noqonaya ciyaartoygii labaad ee toddobaad gudihii ay Real Madrid heshiis la gasho, waxaana ka horreeyey Brahim Diaz oo ay kala soo wareegtay Manchester City xili ciyaareedkaan sii dhamaanaya.
Hordhaca:Chelsea vs Newcastle -Blues-ka oo u soo galaysa sidii ay u gaari lahayd guul